HANAO EZAKA NY FITONDRANA : Ho atao laharam-pahamehana ny famahana ny olan’ny rano
Nampahafantatra ny Filoha Andry Rajoelina fa hataony laharam-pahamehana ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. 23 août 2019
Ho- Ampiakarina ny teti-bola hamatsiana ny sosialim-bahoaka. Tanjona hananan’ny Malagasy isan-tokantrano fiainana mendrika sy ara-dalàna. Tafiditra ao anatin’izany ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny foto-drafitrasa izay mamaly ny filàn’ny mponina. Ho an’ny eto an-drenivohitra manokana dia anisany olana sedrain’ny faritra maro ny tsy fahampian-drano. Anisany nandraisana fanapahan-kevitra io tao anatin’ny filan-kevitry ny minisitra, ny alarobia lasa teo.
Tapaka nandritra izany fa hisy fandinihana manokana mahakasika io olana io. Tsy maintsy apetraka ny tetik’ady mafonja mikasika ny famatsian-drano mba hampifanarahana ny filan’ny mponina sy ny famatsian-drano manerana ny faritra ary indrindra eto an-drenivohitra. Tsy ny eto Antananarivo ihany no mizaka io olan’ny tsy fahampian-drano io fa anisany mibaby izany ihany koa ireo any amin’ny Faritra.``